UWoz U, iqonga elikwi-Intanethi lokufunda itekhnoloji ku-Steve Wozniak | Ndisuka mac
UWoz uphinde waba ngumdlali ophambili webali elitsha. Asipheleli nje ekumboneni ebhaptizwa kwenye yeentengiso zakutshanje zeVodafone eSpain, kodwa idale ukuqala ukufundisa iteknoloji. Kwaye iyakwenza njalo online, ngenxa ukuziqhelanisa namaxesha akutshanje xa abantu befuna ukubanakho ukufunda naphi na kwaye bazihlengahlengise iiyure zabo zokufunda kwiimfuno zabo. Wazalwa ngale ndlela Woz u.
Indlela ekwi-intanethi yenye yezona zisetyenziswayo kwihlabathi liphela; Kwaye kukuba ukufunda akufuneki ukuba kunxulunyaniswe neeklasi zobuso kunye nokuhlengahlengisa ubomi bakho kwishedyuli ethile. UWoz U ufuna ukuba lelo qonga lokufunda kwicandelo lobuchwepheshe, apho ukwazi ukufunda iiyure ezingama-24 ngosuku kwaye ukwazi ukukwenza ukusuka kwiselfowuni, ikhompyuter okanye ipilisi.
I-Woz U ijolise, ngalo mzuzu, kwimakethi yomsebenzi waseMelika. Kwaye yile nto uWozniak echaza oko su ukuqala eqala wazalwa ngenjongo yokuqeqesha abantu kwizakhono kwicandelo lobuchwepheshe ukuba iinkampani ngoku ziyamangalela. Ngokunjalo, kuya kubakho isivumelwano kunye nezinto ezahlukeneyo elizweni (asazi ukuba ngaba kungenxa yenkqubo yoqeqesho) ukujoyina abasebenzi babo.
Uqeqesho lwangoku lujolise kwi Uphuhliso lwe isoftwe kunye nenkxaso yekhompyutha. Nangona kuye kwachazwa ukuba kwixa elizayo kuhloselwe ukwandisa isibonelelo semfundo. Ngo-2018, izihloko ezifana "nophuhliso lwesicelo mobile", "cybersecurity" kunye "data science" ziya kongezelelwa.
Ngokunjalo, u-Woz U akafuni ukuqeqesha abantu kwasekuqaleni. Banazo Isicwangciso "soShishino". Oku kuya kugxila ukuqeqesha kunye nokuhlaziya ulwazi lwabasebenzi ngaphakathi kwenkampani.
Okokugqibela, iWoz U isekwe eArizona. Nangona nje ijonge ukuvula amaziko angama-30 angaphezulu komzimba eUnited States nakwihlabathi liphela. Nangona okwangoku kungekho ndawo ichaziweyo ichaziweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UWoz U, iqonga le-Intanethi lokufunda itekhnoloji kuSteve Wozniak
Jor gtz sitsho
Ingqondo? Haha wayefana neminyaka emi-3 emva kwexesha
Phendula Jor Gtz